Maxaa la sameeyaa dhammaadka usbuuca: talooyin iyo fikrado | Ragga Stylish
Maanta waxaan shaqeynaa saacado badan inta lagu jiro usbuuca oo marka sabtida iyo axada soo gasho ma naqaano waxa aan si wanaagsan ugu qaban karno waqtigeena. Waxaa jira dad badan oo aan aqoon maxaa la sameeyaa dhamaadka usbuuca. Waxaa jira howlo kala duwan oo waqtiga looga faa’iideysto oo looga faa’iideysto waqtiga firaaqada.
Qodobkaan waxaan kuugu sheegeynaa waxa la sameeyo dhamaadka usbuuca si waqti fiican loo helo.
1 Maxaa la sameeyaa dhamaadka usbuuca
1.1 Si aad u jimicsato
1.2 Booqo meelaha cagaaran
1.3 Qor baloog
1.4 Isku qor tababarka internetka
1.5 Maxaa la sameeyaa dhammaadka usbuuca: qorsheynta dhaqaalaha
1.6 Si loo abaabulo qolka
1.7 Maxaa la sameeyaa dhamaadka usbuuca: dhaq gaariga
1.8 Qorsheyso liiska usbuuca
1.9 Samee cuntada usbuuca oo dhan
1.10 Waxa ay sameeyaan dhamaadka usbuuca: waxba ha qaban
Waxaan eegeynaa waa maxay howlaha ugu waaweyn ee aan sameyn karno si aan uga faa'iideysano waqtigeena firaaqada isla markaasna aan uga walwalin wax soo saar badan.
Caadi ahaan dadku waxay leeyihiin cudurdaarka ugu weyn ee aan jimicsi loogu sameyn karin xaqiiqda ah inaysan waqti haysan. Cudurdaarka aan haysan waqtiga ma ansaxayo dhamaadka usbuuca inta aanan shaqeynin. Sabtiyada iyo Axadaha waxay bixiyaan waqti ku filan oo loogu talagalay jimicsi kasta. Waad dooran kartaa inaad ku wareegto magaalada, ku sameyso xeelado xeebeed, aerobics guriga, ama garaacdo jimicsiga haddii uu furan yahay.
Booqo meelaha cagaaran
Qaar ka mid ah waxyaabaha ugu raaxada badan waa booqashada meel cagaaran oo ku taal magaalo magaalo. Waxay keeni kartaa dareen wanaagsan iyo xasillooni maskaxeed inaad booqato meel cagaaran oo waxyar ka fog aagga magaalada. Jardiinooyin, jardiinooyin, socod geed, waxaa jira meelo badan oo noo oggolaan kara inaan la xirirno dabeecadda annaga oo aan ka bixin magaaladeena. Halkan hawadu badanaa waa qabow badan tahay waxaana ku udgoon dhir iyo ubax. Booqashada meelaha cagaaran aad ayey ugufiican tahay caafimaadkeena maadaama ay caawineyso yareynta heerarka walaaca iyo yareynta suurtagalnimada xasaasiyadda, sidoo kale hagaajinta caafimaadka maskaxda.
Waxaa jira dad badan oo raba inay wadaagaan khibradaha iyo aqoonta mawduuc qaar. Aragtida ku saabsan mawduucyada dadka kale waxay ku habboon yihiin markay timaado u safridda meel kasta maanta. Tusaale ahaan, waxaa jira dad badan oo ku kalsoon fikradaha dadka kale kahor intaadan makhaayada aadin. Toddobaadka dhammaadkiisu waa waqtiga ugu habboon ee aan nafteena u hibeyn karno qorista baloog ku saabsan mawduuca aan xiiseyneyno.
Waa waxqabad aan raaxo lahayn oo noo ogolaanaya inaan ku raaxeysano xasilloonida guriga.
Isku qor tababarka internetka
Qofna ma dhihin usbuuca dhammaadkiisa wax ma soo saari karo. Haddii aad shaqeyneyso ama aad wax baranayso oo aad rabto inaad hesho tababar dheeraad ah, dhammaadka usbuuca waa ku weyn tahay. Haddii aadan aqoon waxa la sameeyo usbuuca dhammaadkiisa oo aad dareento mid aan wax soo saar lahayn, waxaa ugu wanaagsan inaad iska qorto tababarka khadka tooska ah. Xullo maadada aad rabto inaad barato oo aad barato oo aad bilowdo tacabur cusub. Maxaa intaa ka badan, waa hab wanaagsan oo lagu horumarin karo manhajkeena.
Maxaa la sameeyaa dhammaadka usbuuca: qorsheynta dhaqaalaha
Mararka qaar kharashaadkayagu way ka bataan dakhligeena mana ogaan karno inta lacag ee aan khasaarinay. Waxaa yimid meel aan la yaabanahay qeybaha maalinteenna maalin ka mid ah aan ku yareyn karno kharashyada. Hab wanaagsan oo loo maalgeliyo waqtiga haddii aynaan garanayn waxa la samaynayo dhammaadka usbuuca waa in kor loo qaadno dhaqaalaha usbuuca. Taasi waa, samee saadaal inta lacag ah waxaan ku bixin doonnaa dhammaan noocyada maqaallada iyo adeegyada. Waxaan sameyn karnaa liiska wax iibsiga, kirada, dharka, dibedda, cuntada, IWM
Ma aha oo kaliya waddo in waqtiga la dhaafo, laakiin waxay sidoo kale xadideysaa lacagta aan kasbanayno inaan lagu bixin waxyaabo aan loo baahnayn. Haddii aan ogaanno waxay tahay inaan iibsanno iyo waxa qiimaheedu yahay, waxaynu la kulmi doonnaa dhibaatooyin yar dhammaadka bisha.
Si loo abaabulo qolka
Marar badan ayaynu maalmaheenna ku qaadannaa shaqo iyo mashquul. Waxa kaliya ee aan dooneyno inaan ku sameyno qolkeena waa hurdo. Sababtaas awgeed, waxaa jira waqtiyo badan oo qolkeennu u eg yahay god. Waxaan ognahay sida dharka looga ilaaliyo meel uun meelna aan loo hagaajin haba yaraatee. Toddobaadka dhammaadkiisu waa waqtiga ku habboon in la dhammeeyo iyada oo waallidan qolkayaga ka talisa. Maaddaama aynaan ahayn inaanu shaqeyno ama ka tagno guriga, ma haysanno wax cudurdaar ah oo aan ku hagaajinno geesteenna gaarka ah. Haddii aadan garanaynin waxaad samaynayso dhammaadka usbuuca, waxaad dooran kartaa inaad qolkaaga si wanaagsan ugu diyaariso.
Maxaa la sameeyaa dhamaadka usbuuca: dhaq gaariga
Waxaa la mid ah baabuurkeenna. Toddobaadka dhexdiisa waxaan kaliya haysannaa waqti aan ku qaadno oo aan ugu aadno shaqo ama aan ugu dhaqaaqno inaan ka adeeganno dukaamaysiga. Markay dhammaadka usbuuc dhammaato waxaan ka faa'iideysan karnaa waqtigeenna si aan u maydho oo aan uga tagno sida dayuuradaha dahabka ah. Kama sameyn karno garaashkeenna ama kuma lugeyn karno rugta dhaqidda ee kuugu dhow. Hadafku waa inuu noqdaa in baabuurkeennu dhalaal ka yeesho.
Qorsheyso liiska usbuuca
Mararka qaarkood waxaan ku cunnaa si deg deg ah oo aan daryeelin cuntadeena. Waxa kaliya ee aan sameyno waa inaan si dhakhso ah u karino si aanan waqti ugu lumin. Waqtiga dheer, caadooyinkaas xun waxay u horseedi karaan dhibaatooyin caafimaad. Sidaa darteed, waxaan usbuucan usbuucan udiyaarin karnaa dhinacyada caafimaadka qaba ee aan waligeen jeclaan jirnay oo aannaan waqti u helin inaan wax diyaarino.
Samee cuntada usbuuca oo dhan
Haddii ay tahay inaan wax u cunno xagga shaqada, dhammaadka usbuuca waa waqti fiican oo la soo raro dhammaan cuntooyinka la geeyo shaqada. Haddii aan haysanno waqti iyo rabitaan, waxaan ku karin karnaa usbuuca oo dhan waxyaabaha ugu caafimaad wanaagsan uguna dalban karno cuntadeena mid ka wanaagsan. Markaan guriga laabanno saacadaha shaqada ka dib, waxaa kaliya loo baahan yahay in wasakhda qaar la cuno oo la cuno Sidan oo kale, waxaan si fiican ugu cuni karnaa cunto kala duwan oo caafimaad leh.
Waxa ay sameeyaan dhamaadka usbuuca: waxba ha qaban
Yaa yiri waxba ha qaban waa khalad. Waxaa jira dad shaqo adag haysta usbuuca dhexdiisa oo doorbida inay nastaan ​​dhamaadka usbuuca. Laakiin haddii aad rabto inaad waxba sameyso, ha sameynin. Waa inaadan ka fikirin inaad ka faa'iideysato waqtigaaga, maxaa yeelay sidoo kale waxay noqon kartaa waajibaad. Haddii aad rabto inaad ku jiifto sariirta oo aad daawaneyso TV ama aad ciyaareyso ciyaar, u tag. Si kastaba ha noqotee, waxaad iska leedahay waqtigaaga firaaqada oo qofna yuusan kuu sheegin waxa la sameynayo dhammaadka usbuuca. Raadi waxyaabo kaa farxinaya oo runtii ku raaxaysanaya waqtigaaga firaaqada ah. Kaliya markaa markaa waad ka jari kartaa oo caafimaad heli kartaa.
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad ku baran karto wax badan oo ku saabsan waxa la sameeyo dhammaadka usbuuca.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » nololeedka » Maxaa la sameeyaa dhamaadka usbuuca